ဖျားနာချိန်မစားသင့်တဲ့အစားအစာများ | The Restaurant Guides for Myanmar
Magazines Event Job Boards Advertising
Jozrin Food Delivery Service လုပ်ငန်းခေတ...
Covid-19 ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပြီး စ...
Bubble tea ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်၏မူလအစ
ဖျော်ရည် / Juice / သစ်သီးဖျော်ရည် ဆိုတာ ...
စတော်ဘယ်ရီကီဝီဖျော်ရည် (Strawberry Kiwi ...
အထူးပရိုမိုးရှင်းအဖြစ်(၅) ပွဲ (၁) ပွဲ လက...
ပုဂံရောက်ရင် စားသင့်တဲ့ မြန်မာဘူဖေး အညာထ...
မန္တလေး မှာလည်လည် စားမယ်..
နေမကောင်းဖြစ်လို့ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ အချိန်မှာ စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာရှိသလို မစားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေက မစားသုံးသင့်တဲ့အထဲပါလဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးပါမယ်။
ကြက်ဥကတော့ Salmonella ဘက်တီးရီးယားကို ပျံနှံ့စေပါတယ်။ ဒီပိုးဟာ ကြက်ဥအတွင်းမှာ ပေါက်ပွားနိုင်တာကြောင့် ကျက်အောင်ချက်ပြုတ်စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ ကြက်ဥကို မကျက်တကျက်စားတာ၊ မုန့်တွေမှာလည်း မကျက်တကျက်ထည့်မိတာတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ကျက်အောင်ချက်ထားတဲ့ အာလူးတွေဟာ ဘေးကင်းပေမဲ့ မကျက်တဲ့အာလူးတွေကတော့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြားရောဂါပိုးရှိတဲ့ အသားတွေနဲ့ ရောနှောထားခဲ့ရင်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားဖို့အတွက် ရေခံမြေခံနေရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အစာအဆိပ်အတောက်လည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ အစားအသောက်ထဲ အသုံးမပြုခင် သေချာသန့်စင်အောင် ဆေးကြောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစိမ်းလိုက်စားသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း အခြားစားစရာများနှင့် ရောထား၊ထိထားခြင်းများကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။
ပဲပင်ပေါက်ကလည်း ရောဂါပိုးတွေပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေကောင်း တရပ်ပါ။ ယင်းတို့ အညှောင့်ပေါက်အောင်ထားရတဲ့ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ အနေအထားက ရောဂါပိုးတွေပေါက်ပွားဖို့အတွက် နေရာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လို့ပါ။ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ မစားသုံးသင့်ဘူးလို့တောင် ဆိုကြပါတယ်။
မုန်ညှင်း၊ဂေါ်ဖီ၊ပန်းဂေါ်ဖီနဲ့ ဟင်းနုနွယ်တွေစတဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ အစိမ်းစားလို့ရတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာ စိုက်ခင်းထဲကပါလာတတ်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ ဆေးကြောတာတွေ ၊ ကိုင်တွယ်သူရဲ့ လက်မသန့်ရှင်းတာတွေဟာ အရွက်မှာ ရောဂါပိုးတွေကို ကပ်ငြိစေပါတယ်။ လက်ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ရေသန့်သန့်ဖြင့်ဆေးခြင်းအပြင် အသားအတွက်အသုံးပြုတဲ့ စဉ့်တီတုံးတွေကို အရွက်အတွက် အသုံးပြုခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
နွားနို့အစိမ်းကို ဟာ မသောက်သုံးသင့်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ နွားနို့မှာ ကြွယ်ဝတဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေရှိပေမဲ့ ကျက်အောင်ကြိုချက်မသောက်ဘူးဆိုရင်တော့ Salmonella, Campylobacter နဲ့ E.coli လို ဘက်တီးရီးယားတွေကပေးတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသားတွေကနေ ရောဂါစုံကူးတတ်တာ လူတော်တော်များများ သိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သားက အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယကတော့ အမဲသားပါ။ သေချာကျက်အောင်မချက်ထားတဲ့ အသား၊ကြက်ဥ၊နွားနို့၊ ပင်လယ်စာ စတဲ့အရာတွေကနေ ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသားတွေကို သေချာကျက်အောင်ချက်ပြုတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Read 44 times.
Our Food Tour
Pabedan - Yangon
Latest articles published in
အင်းလေး/ကလော/ပင်းတယ/ ညောင်ရွှေ သို့ရောက်လျှင် စားသင့်သည့်ဆိုင်များ ...
နေပြည်တော် (သပြေကုန်း)က ပင်လယ်စာနှင့် ရခိုင်စာကောင်းကောင်းရတဲ့ဆိုင် ....
Covid-19 ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်အနေနဲ့ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိစားသောက်ဆိုင်ငယ်များအတွက် Grab ၏အစီအစဉ်အသစ်
အဆင့်အတန်းမှီမှီ Fine Dining ဘယ်လိုစားသင့်သလဲ
Online ‌ပေါ်မှာ ဈေးဝယ်မယ် ..
Copyright @ 2019 the Myanmar Restaurant Guide, All Rights Reserved.